ne admin pane 20-07-25
Chirongwa cheAzerbaijan chinosanganisira chivezwa chendarira cheMutungamiri neMukadzi weMutungamiri.
Saudi Arabia Hurumende Project
Saudi Arabia Hurumende chirongwa chine zviviri zvebronze zvivezwa, zvinova zvihombe square rilievo (50 metres kureba) uye Sand Dunes (20 metres kureba). Iye zvino vamire muRiyadh uye vanoratidza chiremerera chehurumende uye nepfungwa dzakabatana dzevanhu veSaudi.
Isu takatumira kunze imwe nhete yezvivezwa zvebronze zveUnited Kingdom muna2008, iyo yaive yakagadzirirwa kutenderedza zvemukati mekusunga mabhiza emabhiza, simbi, zvigadzirwa-zvekutenga uye zvigaro zvemabhiza emambo. Iyo purojekiti yakaiswa muBritain Square uye ichiri kuratidza runako rwayo kune nyika parizvino. Wha ...
Isu takagadzira seti imwe yezvivezwa zvebronze zveKazakhstan muna2008, kusanganisira zvimedu zvitanhatu zve6m-yakakwira General On Horseback, 1 chidimbu che4m-kumusoro Iyo Emperor, 1 chidimbu che6m-yakakwira Giant Eagle, 1 chidimbu che5m-yakakwira Logo, 4 zvidimbu zve4m-yakakwira Bhiza, zvidimbu zvina zve5m-refu maDeers, uye 1 chidimbu che30m-refu Relievo expre ...